होसियार ! चिठ्ठाका नाममा ठगिनुहोला « प्रशासन
होसियार ! चिठ्ठाका नाममा ठगिनुहोला
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल वा मोबाइलमा चिठ्ठा परेको वा बम्पर पुरस्कारमा छनोट भएको म्यासेज आएको छ ? छ भने होसियार रहनुस्, अन्यथा ठगिनुहोला ।
गत मंसिरयता मात्रै पर्सामा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुने २७ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले २०७४ मंसिर १४ गते ६, पुस ३ गते तीन, फागुन ७ गते तीन, फागुन २१ गते पाँच, चैत ७ गते तीन र चैत ३० गते ३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
ठगी गर्नेले सामाजिक सञ्जाल (ह्वाटस्अप, इमो, भाइबर र फेसबुक) र मोबाइलमार्फत् विभिन्न व्यक्तिलाई २५–३५ लाख रूपैयाँको चिठ्ठा परेको, बम्पर पुरस्कारमा छनोट भएकोलगायत म्यासेज पठाउने गरेको र सोबाफत सरकारलाई तिर्न भन्दै रकम असुल्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले पक्राउ परेका सबैविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तीमध्ये १२ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अन्य अभियुक्त धरौटीमा छुटेका प्रहरीले जनाएको छ ।
ठगीमा भारतीयको संलग्नता
चिठ्ठा ठगीमा भारतीयको संलग्नता देखिएको छ । प्रहरीका अनुसार गत मंसिरयता चिठ्ठा ठगी आरोपमा पक्राउ परेकामध्ये ९ जना भारतीय छन् । यहाँका व्यक्तिहरू भारतीयको डिजाइनमा ठगी गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्ता गिरोहले भारत र पाकिस्तानका गिरोहलाई पनि रकम पठाउने गरेको प्रहरीको आशंका छ ।
प्रहरीले सोमबार मात्रै चिठ्ठाका नाममा ठगी गरेको भन्दै चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यो घटनाका मुख्य अभियुक्त वीरनारायण चौरसियाले भारत र पाकिस्तानको अभियुक्तलाई दैनिक एक लाख रूपैयाँ पठाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।